Cudurka ‘Snapchat dysmorphia’ ee laga qaado baraha bulshada oo ka sii daraya – Radio Daljir
Cudurka ‘Snapchat dysmorphia’ ee laga qaado baraha bulshada oo ka sii daraya
Agoosto 30, 2018 2:03 g 0
Adduunku maanta waxa uu marayaa meel halis oo sababa in qofku uu kala garanwaayo runta iyo beenta, muuqaalka rasmiga ah iyo kan la been-abuuray. Been-abuurku kuma koobna qoraalo iyo masawiro la been-abuuro, ee hadda waxa uu gaaray in uu saameyn xun oo nafsiyan ah ku yeesha qofka laftigiisa, muuqaalkiisa, iyo kaba sii daran e sida uu isticmaalaha baraha bulshadu uu isku maleeyo ama u mala-awaalo in uu qof ahaan u egyahay.
Waqtiga maanta ee “igu-sawir” waxaa ku soo siiyaaday cudur aan hore u jirin oo hadda ku dhaca isticmaalaha baraha bulshada. Waa cudur loo bixiyey “Snapchat dysmorphia,” ama haddii aan af Soomaali ahaan ku tarjuno “cudurka waji-baddalka.”
Cudurku waa mid uu qofku cuqdad ka qaadayo sida uu u egyahay, badanaa sida uu waji ahaan u egyahay, deedna ayada oo la isticmaalayo filtariska (baddalayaasha) Snapchat ama Instagram waxa uu qofku muuqaalkiisa ama sawirkiisa (ama sawirkeeda) ka samaynayaa ama ka soo saarayaa muuqaal u eg qofka uu jecelyahay in uu u ekaado, ha ahaato dhanka midabka, muuqalka wajiga, ballaca sanka, ilkaha iyo waliba jismiga bashimaha. Wajiga kaliya kuma eka ee waa mid xubnaha qofka oo dhan laga yaabo in uu cudurku saameeyo.
Joornaalka caanka ee “Journal of American Medical Association” oo qoraal cilmiyeysan ka qoray ‘cudurka waji-baddalka Snapchat” ayaa ku macneeyey cudur nafsi ah oo saameyn ku yeesha qofka iyo noloshiisa, asaga oo qofku uu maciin bido in la qalo oo muuqaalkiisa ay badalaan dhakhaatiirta “plastic surgery.”
Qofka uu cudurkani ku dhaco heer waxa uu gaarayaa in uusan saaxibadi la macaamili karin baqdin uu ka qabo muuqaalkiisa, laakiin waxa uu mar kasta asxaabta u dirayaa muuqaalo filtar-ahaan loo badalay, una eg muuqaalkiisa uu la dhacay.
Dhakhaatiirta ayaa ku macneeyey in ayba suurtagal tahay in aan la dareemin karin cilladda muuqaal ee qofku uu ka cabanayo, oo ay tahay mid maankiisa oo kaliya ka guuxaysa. Saas oo ay tahay, qoraalo ka soo baxay Mayo Clinic ayaa sheegay in ay jiraan kahortag la samayn karo iyo daawooyin loo qaadan karo cudurkaas nafsiga ah iyo waliba daaweyn dhanka maskaxda qofka, si loo suuliyo codadka aan jirin ee qofkaas maankiisa ka guuxaya.
Shaki kuma jiro in dadka Soomaaliyeed ay ku yaaceen baraha bulshada, qaarkoodna ay abuurteen nolol khiyaali ah oo feersocota tooda la yaqaan (ama xataa aan la aqoon), ayna jiraan midab-rog ballaaran oo loo yaqaan “Dayaana” saameeyana gabdhaha Soomaaliyeed.
Saas oo ay tahay, haddana ma foga, waa haddii aan laga taxadarin, in waqti dhow la arki doono dhakhaatiir ajnabi (una badan Hindi) oo xafiisyo ka furta magaalooyinka waaweyn ee dalka, ayaga oo dhallinta Soomaaliyeed ka ballanqaadaya waji iyo jir u eg kaaga mala-awaalka ah ee Snapchat.
Haddii shalay lagu khasaaray “Maggafe” oo maal iyo dadba la isugu daray, wax ma laga bartay, ma se laga yaabaa in maantana naf iyo maal la isugu daro “Datoor Waji-baddal” oo ballanqaadaya in uu kuu ekaysiiyo atoorayaasha iyo atariishooyinka Hollywood iyo Bollywood?
Radio Daljir SOMALIA
Maqaalo Kale 250 Wararka 17875
Muqdishu: Fursad Shaqo RELIEF INTERNATIONAL – Security Officer (Somalia)
Muuqaalka Bulshada ee Radio Daljir: Daryeelka Carruurta Darbijiifka (dhegayso)